Ciidanka PSF Gaalkacyo oo Gaalkacyo Dhireynaya (sawirro & dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 1, 2017 9:12 g 1
Ciidanka PSF Gaalkacyo iyo maamulka degmada ayaa maanta daahfuray mashruuca dhireynta Gaalkacyo, waxaana isla maanta la talaalay 100 geed oo ah qaybta 1aad ee mashruuca dhireynta.
Mashruucan waxaa fulinaya Ciidanka PSF (ciidanka Difaaca Puntland) waxaana horay looga soo hirgaliyey Garoowe iyo Bossaaso. Mashruuca ayaa loo bixiyey “mashruuca dhireynta degmooyinka Puntland iyo bilicda degmooyinka.”
Duqa degmada, Tumey
Abdirahman bashir jama 4 years ago
ascl waxaan u mahadcelinayaa RADIO DALJIR iyo shaqaaalihiisa oo marka u heelan hormarinta iyo soo gudbinta talaabooyin wanaagsan dalka horey ugu socda waxaana oran karaaa RODIO ugu shacab ka badan puntland cidacadah ka jira. sidoo waxaan ammaan iyo bogaadi u dirayaaa CIIDANKA DIFAACA PUNTLAND ee PSF oo wada mashruuca aad u muhiimsan waxaana oran lahaaa GUULEYSTAYAAAL WALI GEEDIGU WAA SOCDAA. HAWL KAMA DAALOOYIN WALI CIDDII WAA HAYAAAAN